Tag: sumcad shaqsiyeed | Martech Zone
Tag: astaan ​​shaqsiyeed
Iska ilow cuntada iyo xayeysiinta shukaansiga; Waxaan u maleynayaa in qaar ka mid ah suuqgeynta ugu khiyaano badan ay jirto internetka ay yihiin khabiiro suuq geyn ah oo sii wadaya dhaleeceynta noocyada iyo ku wacdinta daahfurnaanta internetka. Iyagu waa wax uun laakiin hufan. Waxaan joogaa waqti xiiso badan noloshayda. Ganacsigeygu sifiican ayuu u socdaa, nolosheyda shaqsiyadeed waa weyn tahay, caafimaadkeyguna wuu soo fiicnaanayaa bil kasta oo dhaafto. Taasi waxay tidhi, ganacsigeenna iyo noloshayda gaarka ah weli waxay leeyihiin caqabado aad u weyn.
Calaamadeynta Shakhsiyeed: Sida Loo Qoro Wax Ku Saabsan aniga
Andrew Wise wuxuu qoray maqaal runtii qoto-dheer oo ku saabsan Ultimate Sida loo Hageyo Dhismaha Wax igu Saabsan aniga oo ah inaad u tagto si faahfaahsan. Maqaalka oo uu weheliyo, wuxuu soo saaray infographic aan hoos ku wadaagno oo daboolaya codka & codka, hadalada furitaanka, shakhsiyadda, bartilmaameedsadayaasha iyo baahiyaha kale. Waan jeclahay inaan kudarto 2 senti arimahan, markaa halkan ayaa loo socdaa. Runtii waan kugu dhiiri galin lahaa ganacsi ahaan ama sidii
SEO waa dhintay. Sannad ka hor ayaan sidaa u idhi oo wali waxaan hayaa qaar ka mid ah dadka SEO oo xanaaqsan oo faallo ka bixinaya boostada toddobaad kasta. Google wuxuu sii waday inuu cadaadiyo kulamadeena SEO-ga ee dadku ay u ciyaarayeen si ay u ciyaaraan darajada macaamiishooda - qaar badan oo ka mid ahna wali waxay la kulmayaan cawaaqib xumada maanta. Kuweena macaamiishayada ka soo saaray dabka goor hore si wanaagsan ayay qabteen. Waxaan ku qabaa dareenno isku dhafan tan
Arbacada, Janaayo 13, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan wadahadal la yeeshay hal saaxiib maanta waxaan ka helay emayl mid kale oo i weydiinaya taladayda ku saabsan sida loo dhiso sumcaddooda shaqsiga ah… ugu dambayntiina looga faa iidaysto. Tani waxay noqon kartaa mowduuc uu sifiican ugajawaabay saaxiibkiis Dan Schawbel, oo ah khabiir ku xeel dheer sumadaha… marka isha ku hay balooggiisa. Waxaan la wadaagi doonaa fikradahayga wixii aan qabtay tobankii sano ee la soo dhaafay, in kastoo. Is muuji sida aad jeceshahay in laguu arko - I